How to Make Your Career Plan
Khai Deih Neam Digital Marketing Executive သင်က သာမာန် မနက် ၉ နာရီကနေ ညနေ ၆ နာရီ ထိ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူဆိုရင် သင်ရဲ့ အလုပ်ကို ငါးကြိမ်ကနေ ၇ ကြိမ်အထိ ပြောင်းဖို့ သင်မျှော်လင့်ထားလို့ရပါတယ်။သို့ပေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့&nbsp;ပြင်ဆင်ထားပြီး အစီစဉ် လုပ်ထားဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။သင့် career အောင်မြင်ဖို့အတွက် Career Plan ရှိဖို့က လိုအပ်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်တဲ့ Jeff Bezos (Amazon တည်ထောင်သူ)၊Mark Zuckerberg(Facebook တည်ထောင်သူ) တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ...
How To Upgrade Your Problem Solving Skill
Thant Thandar SoeDigital Marketing Executiveကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် ဘဝအတွက် လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတစ်ခုဖြစ်သလို၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း အရေးကြီးတဲ့အရည်အချင်း တွေထဲကတစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေက မွေးရာပါ Problem solving skill ကောင်းတဲ့သူတွေရှိ သလို၊ Problem solving အားနည်းတဲ့ သူတွေဟာလဲ လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ Problem solving skill ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။၁. အိပ်ချိန်ကို သတ်မှတ်ပြီးပြည့်ဝအောင်အိပ်ပါ။အိပ်ချိန် နည်းနည်းပဲအိပ်တာနဲ့ အိပ်ချိန်များတာတို့ကသင့်ရဲ့ စဉ်စားနိုင်စွမ်းနဲ့ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့အိပ်ချိန်ဟာ တစ်နေ့ကို 7နာရီ မှ 8 နာရီ အကြားလိုအပ်ပါတယ်။၂. Logical ကျကျစဉ်းစားရတဲ့ Game တွေကစားပါ။Chess, ...
Thant Thandar SoeDigital Marketing Executiveအရာရာတိုင်းက Plan အပေါ်မှာ မှီခိုနေတာပါ။ Plan မရှိပဲ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ တစ်ချိန်ကျရင် ပလန်လက် ပက်လက်လန်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲတော့ ပက်လက်မလန်ရအောင် ဘာအတွက်ပဲ Plan ချချ ဒီအချက် ၅ ချက် ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ Plan တစ်ခုကို ချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။1. ဘာလုပ်ချင်တာလဲကို သိအောင်လုပ်ပါ။﻿ကိုယ်ကိုကိုယ် အတွက် Plan ချသည်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်အတွက် Plan ချသည်ဖြစ်စေ ပထမဆုံးအနေ နဲ့ သင်ကဘယ်နေရာ ဘယ်အဆင့်မှာရောက်နေပြီး သင်နောက်ထပ်ဘယ်နေရာ ကိုသွားချင်တယ်၊ ဘယ်အဆင့်ကို သွားချင်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပါ။2. ဘယ်အရာတွေက အရေးကြီးလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပြီး အရေးကြီးတာတွေကို အရင်ဆုံးလုပ်ကိုင်ရန် အတွက် အစီအစဉ်ချပါ။ သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့အတွက် ဘယ်အရာတွေကို လုပ်ရင်မြန်မြန်ပိုရောက်နိုင်သလဲ စသည်ဖြင့်စီစစ်ရပါမယ်။3.ဘယ်သူမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ သင်က လုပ်ငန်းအတွက် ဆိုရင်Deparment က ဒီ Goal တွေကို ရရှိဖို့အတွက် ပိုအရေးပါလဲ။ လူတစ်ယောက်ချင်းအတွက်ဆိုရင်လည်း Goal ကို ရဖို့အတွက် ဘာကအဓိက လိုအပ်သလဲဆိုတာ စီစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။4. ပြီးရင်တော့ လိုအပ်တာတွကို ဘယ်လို ရှာဖွေမလဲဆိုတာကို စီစစ်ရပါမယ်။ ဥပမာ သင့် ရဲ့ ရည်မှန်းချက် က Executive သို့ Manager ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်၊ လိုအပ်တဲ့ အရာတွေဖြစ်တဲ့အရည်အချင်းနဲ့ အတွေ့အကြုံ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ သင်ကြားမှုတွေကို လည်းအပြင်သင်တန်းကျောင်းတွေကနေ သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။5. ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။﻿ဘယ်အရာတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အရာတွေကိုလည်း အမြဲမပြတ် ပြန်လည်စီစစ်နေဖို့ လဲလိုအပ်ပါတယ်။အထက်ပါအချက် ၅ ချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရင် အရမ်းမပြည့်စုံရင်တောင် အလုပ်ဖြစ်တဲ့ ...
Khai Deih Neam Digital Marketing Executiveယခုအခါမှာ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့ကနေ ပြန့်ပွားလာတဲ့ COVID 19 ကို WHO ကနေ ကပ်ရောဂါအနေနဲ့ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်တဲ့ ဆေးကို မထုတ်လုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကို အထူးပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ကြိုတင်ကာကွယ်နည်းတစ်ခုကတော့ လူစုလူဝေးများတဲ့ နေရာကို ရှောင်ပြီးတော့ အိမ်မှာနေဖို့ပါပဲ။အဲ့အတွက်ကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်အများစုကတော့ အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်ဖို့ ကို ပြင်ဆင်ပေးကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာ အလုပ်မတွင်မှာနဲ့ အချိန်ဆွဲမိမှာ ကြောက်ကြပါတယ်။အဲ့လိုမဖြစ်ကြဖို့ အောက်က နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့ပါတယ်။Source : internet၁။ အလုပ်သွားသလိုပဲ ဝတ်စားဆင်ယင်ပါကျွန်တော်တို့အများစုက ရုံးသွားစရာ မလိုဖူးဆိုပြီးတော့ အိမ်နေရင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် အဲ့လို ဝတ်ဆင်ရင် အရမ်းပေါ့ပါးသွားပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ serious မဖြစ်ကြတော့ပါဘူး။အဝတ်အစားကြောင့် အိမ်မှာပါပဲလေ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဆိုပြီး အလုပ်လုပ်ရမယ့်အခါ TV တွေ ကြည့်နေမိမယ်၊တခြားအလုပ်နဲ့ မဆိုင်တာတွေကို လုပ်နေမိမယ်ဆိုရင်တော့ သင် remote လုပ်တာက ရုံးပိတ်ပေးပြီး အနားယူတာနဲ့ တူနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့တာကြောင့် အိမ်နေရင်းအင်္ကျီ ကြီးနဲ့ အလုပ်မလုပ်ပဲ ကိုယ့်ကို serious ဖြစ်စေမယ့် အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြရအောင်။၂။ အနှောင့်အယှက်မရှိတဲ့ နေရာမှာ အလုပ်လုပ်ပါ။အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်ရင် အိမ်က လူတွေက စကားခဏခဏ လာပြောတာ၊TV ဖွင့်ထားလို့ ဝင်ကြည့်လိုက်တာ အစရှိတဲ့အရာတွေကို အလုပ်ကို မပြီးမြောက်စေပါဘူး။ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို မလုပ်ပဲ အနှောင့်အယှက်တွေနောက်ကို လိုက်ပြီး လုပ်နေမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Performance ကို ကျစေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်ကို အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းစေတဲ့ နေရာမှာပဲ အလုပ်လုပ်ပါ။၃။ အနည်းဆုံး နှစ်နာရီတစ်ကြိမ် သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ...
Things to Do When You Feel Overwhelmed at ...
Khai Deih NeamDigital Marketing Executiveသင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ တစ်ခါတစ်ရံ သူများတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့ အလုပ်တွေပိလာတဲ့အခါမှာ သင့်ကိုယ်ကိုယ်သင် ပိတ်မိနေတယ်လို့ ခံစားတတ်ပါတယ်။အဲ့တာ ခံစားမှုတွေကနေ လွတ်မြောက်ပြီး အလုပ်ကို အာရုံစိုက်ပြီး အလုပ်ပြီးနိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?အောက်ပါ နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာခြင်းက ကူညီပေးနိုင်မှာပါ။၁။ စီစဉ်ချဖို့ အချိန်ယူပါသင့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို အလဟာသ အဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့။အဲ့အချိန်တွေအတွက် သင်အလုပ်လုပ်ပါ။ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ စီစဉ်ဖို့အတွက် လုပ်ပါ။ပြီးရမယ့်အလုပ်တွေကို ချရေးပြီး ဘယ်ဟာကို အရင်ပြီးအောင်လုပ်ရမယ့်ဟာကို ရှေ့မှာထားပါ။အဲ့လိုချရေးတာကို သင့်ခေါင်းထဲမှာ အစီအစဉ်မကျတဲ့ အရာတွေကို အစီအစဉ်တကျနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြီးမြောက်စေမယ့်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ ၁ မိနစ်လောက် ငြိမ်သက်နေပါ။ပြီးရင် စာရွက်တစ်ရွက်ကိုယူပြီး သင့်ပြီးရမယ့်အလုပ်တွေကို ချရေးပါ။ပြီးတော့ အရေးကြီးဆုံးတွေကို မှတ်သားပါ။အရေးအကြီးဆုံးကနေ စပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့် အချိန်မကုန်တော့ပဲ သင့်အတွက် အချိန်ပိုတွေ ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။၂။ရုံးကနေ ထွက်ပါ။ရုံးကနေထွက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာ အလုပ်ထွက်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။သင်ကို အလုပ်တွေက လွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါမှာ သင့်ရုံးခန်းက ဆိုးရွားတဲ့နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ၁၀ မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီး အပြင်မှာ လေညင်းခံ ထွက်လိုက်ပါ။လတ်ဆတ်တဲ့လေက သင့်ကို ပေါ့ပါးစေမှာပါ။တကယ့်လို့ သင် laptop ကိုယူသွားလို့ရတယ်ဆိုရင် အပြင်မှာ နာရီဝက်၊တစ်နာရီလောက် အလုပ်လုပ်လိုက်ပါ။သင်ကြိုက်တဲ့ ကော်ဖီဆိုင်၊သို့မဟုတ် ပန်းခြံတစ်ခုခုမှာပေါ့။၃။သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကို ပြောပါ။အလုပ်တွေက သင့်ကို လွှမ်းမိုးလာပြီလို့ သင်ခံစားရတဲ့အခါမှာ သင်လုပ်သင့်တဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ စကားပြောတာပါ။အဲ့လိုပြောခြင်းအားဖြင့် သူက သင့်ကို ကူညီနိုင်တဲ့အရာရှိရင် ကူညီနိုင်ပြီး သူလည်းအဲ့လို ခံစားဖူးတာမျိုးရှိရင် သူအတွေ့အကြုံကို ပြန်လည်ပြီး ပြောပြပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။သင်က သင့်သူဌေးနဲ့ စကားပြောရတာအဆင်ပြေတဲ့သူဆိုရင်တော့ သူဌေးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြပေးပါ။အဲ့တာမှ သင့်သူဌေးကလည်း ဘယ်အလုပ်တွေကို အာရုံစိုက်သင့်လည်း ဘယ်အလုပ်က အရေးကြီးလဲဆိုတာကို ပြောပြနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။၄။အိပ်ရေးဝဝ အိပ်လိုက်ပါ။ကျွန်ပ်တို့တွေက အလုပ်တွေ များနေရင် စဉ်းစားတတ်ကြတာက ငါ ညမအိပ်တော့ပဲ အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့။အဲ့လို အတွေးအမှားတွေကို မတွေးပါနဲ့တော့။သင်မျက်လုံးကျယ်ဖို့ ဖျော်ထားတဲ့ ကော်ဖီကို ချပြီး အိပ်ရာဝင်လိုက်ပါ။သင်အလုပ်များနေတဲ့အချိန်မှာ အလုပ်အရမ်းလုပ်နေခြင်းက သင့်ကို အထောက်အကူမပြုပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အလုပ်များလေ သင့်ဦးနှောက်ကို သင့်က အလုပ်ပေးလေ ဖြစ်လို့ပါ။အဲ့အခါမှာ သင်ပိုပင်ပန်းပြီး ပို အလုပ်မပြီးတော့ဘူးပေ့ါ။အဲ့တာကြောင့် ဦးနှောက်ကို အနားပေးပြီး နောက်နေ့ရက်မှ လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ အစပြုလိုက်ပါ။အလုပ်များတဲ့အခါ အလုပ်က ကိုယ့်ကို လွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါမှာ လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို လက်တွေ့ အသုံးချဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။New Day Jobs ကတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက အလုပ်တွေကို တနေရာတည်းမှာ တွေ့နိုင်တဲ့ Job platform ဖြစ်ပါတယ်။ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်အကိုင်တွေကို New Day Jobs မှာ ရှာဖွေလိုက်ပါ။
Khant Zaw HeinDigital Marketing InternNew Day jobs ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှ အလုပ်အကိုင်များကို တစ်နေရာတည်းမှာ ရှာဖွေနိုင်တဲ့ Job platform ဖြစ်ပါတယ်။ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်အကိုင်များကို New Day Jobs မှတဆင့် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
How to be Networking King & Queen
Khai Deih NeamDigital Marketing ExecutiveNetworking event သွားတယ်ဆိုတာ အချို့လူတွေအတွက် ကြောက်စရာစိုးရိမ်စရာ မလိုပေမယ့် တချို့ ကျတော့ Small talk လိုမျိုး မပြောတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Networking event သွားရမယ်ဆိုရင် ကြောက်ကြပါတယ်။d လိုမျိုး မသိဘူးတဲ့ သူတွေနဲ့ အခန်းတစ်ခုတည်းမှာ အတူတကွမိတ်ဆက်ပြီး စကားပြောဖို့ဆိုတာ အချို့အတွက်တော့ ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလူတွေအတွက် ဘယ်လို Networking Queen နဲ့ King တွေ ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ ဖော်ပြထားပါတယ်။သင့်အိမ်စာကို လုပ်ပါ။အိမ်စာလိုပြောတဲ့အခါမှ တကယ့် စာကို ပြောတာမဟုတ်ပဲ သင့်အနေနဲ့ Networking ပွဲမှာ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလာမယ်။ဘယ်သူတွေကို စကားလိုက်ပြောလိုက်လို့ သင့်အတွက် အကျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကို အိမ်ကတည်းက research လုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။...
Top5Quick, Affordable Team Outing Places In Yangon
Thein Htike AungDigital Marketing Executive.Top5Quick,Affordable Team Outing Places In Yangonကိုယ့် team က လူတွေနဲ့ team building လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာ ရန်ကုန်မြို့ပြင်လည်းမထွက်ချင်မြို့ တွင်းမှာပဲ ဘာတွေလုပ်လို့ လုပ်ရမလဲ၊ ဘယ်တွေသွားလို့ သွားရမလဲမသိ ဖြစ်နေတတ်တာ လူတော်တော်များများပါ။ ဒါကြောင့် ...
Improve Your English Rapidly
Khant Zaw HeinDigital Marketing InternNEW DAY JOBS ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးမှ အလုပ်အကိုင်များကို တစ်နေရာတည်းမှာ ရှာဖွေနိုင်တဲ့ Job platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် လူကြီးမင်းတို့ လျှောက်ထားလိုတဲ့ အလုပ်အကိုင်များကို New Day Jobs မျတဆင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
Top5Skillset for Digital Marketer
Thein Htike Aung,Digital Marketing ManagerTop Five Skillsets for Digital Marketerဒစ်ဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းဆိုတာ ယခုခေတ်မှာ အရမ်းခေတ်စားတဲ့ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုဖြစ်သလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းမှာလည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကုန်ပစ္စည်းတွေကြေငြာဖို့၊ ရောင်းချဖို့၊ တိုးချဲ့ဖို့အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းနှင့် ကင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကတ်တင်း လုပ်တတ်ဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့အချက် (၅) ချက်နှင့် ဘယ်လိုလေ့လာနိုင်မလဲ အကြောင်းအရာကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။Google Analyticsအင်တာနက်နှင့် အွန်လိုင်းလို့ပြောရင် Google ဆိုတဲ့ဆရာကြီးကို မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် အင်တာနက်ဆရာကြီး အကြောင်းကိုသိထားဖို့ဟာ ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းလုပ်မဲ့သူတွေအတွက် အရေးတကြီးသိထားရမဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်လိုသိအောင်လုပ်ရမလဲ?သင်တန်းတွေပြေးတက်စရာမလိုပါဘူး။ အိမ် (သို့) အင်တာနက်ရမဲ့ ကော်ဖီဆိုင်မှာ အင်တာနက်ဆရာကြီးကပို့ချပေးနေတဲ့ အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာယုံပါပဲ။Google Analytics ...
Career Advice Workplace Success
Ronaldo: Rely On Yourself, Not Talent
Khai Deih NeamDigital Marketing Specialistမွေးရာပါ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည် ဘယ်လောက်ပဲ ရှိရှိ သင် မကြိုးစားရင် အလကားပါ။ပင်ကိုယ်စွမ်းရည် မရှိလဲ စိတ်ညစ်စရာမလိုပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ အောင်မြင်မှုဆိုတာ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်းနဲ့ မသက်ဆိုင်ပဲ ကြိုးစားမှုနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကို သက်သေထူခဲ့တာသူ တစ်ယောက်ရှိလို့ပါ။သူကတော့ အများက စီရော်နယ်ဒိုလို့ သိကြတဲ့ ခရစ်တီယာနို ရော်နယ်ဒိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။စီရော်နယ်ဒို ဟာ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၅ ဖေဖော်ဝါရီလ မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဘောလုံးအားကစားကို ဝါသနာပါခဲ့ပြီး အခုလို ထူးချွန်တဲ့ ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက တစိုက်မတ်မတ်နဲ့ ကြိုးစားခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။.ငယ်စဉ်တုန်းက အမေရဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်မှုအောက်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်ဒိုက ခက်ခဲတဲ့ ငယ်ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အရက်သောက်တဲ့ ဖခင်ကြောင့် သူ့ရဲ့ မိခင်က ထမင်းချက်အဖြစ်လုပ်ကိုင် ကျွေးမွေးပြီး ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ စီရော်နယ်ဒိုဟာ ဘဝအကြောင်းကို နှောကြေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူက ဘောလုံးကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ဝါသနာပါခဲ့ပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမယ့် ၂၀၀၇ -၂၀၀၈ ဘောလုံးရာသီ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ုတိယပွဲစဉ်မှာတုန်းက စီရော်နယ်ဒိုဟာ Portsmouth အသင်းရဲ့ ကစားသမား Richard Hughes ကို ခေါင်းနဲ့တိုက်ခဲ့တာကြောင့် အနီကတ် ပြသခြင်းခံရပါတယ်။ အဲ့အချိန်တုန်းက လူတွေက သူ့ရဲ့ ဘောလုံးစွမ်းရည်ကို သံသယ ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သူကိုယ်တိုင်ကလည်း သူကိုယ့်ကိုယ်သူ ဘောလုံးကန်ဖို့ စွမ်းရည် မရှိဘူးလို့ သံသယ ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဝေဖန်မှုတွေလည်း အများကြီးခံခဲ့ရပြီး သူကလည်း စိတ် ဓာတ် ကျခဲ့ပါတယ်။ ါပေမယ့် သူက အဲ့အတွက်ကြောင့် သူရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို ရပ်တန့် ခဲ့တာတွေ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူအရင်ကထက် ပိုလေ့ကျင့်ပြီး ကွင်းထဲကို ပြန်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။.ဘောလုံးသမားတွေထဲမှာ လေ့ကျင့်မှုအများဆုံး ဘောလုံးသမားဆိုရင် ပြောပါဆိုရင် စီရော်နယ်ဒို လို့ အများစုက ဖြေရလောက်အောင် ကြိုးစားတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ ပေါ်တူဂီနည်းပြဖြစ်တဲ့ ကာလို့စ် ကတောင်မှာ "တချို့သောဘောလုံးကစားသမားတွေက ယုံကြည်မှုတွေ အရှိလွန်းပြီး လေ့ကျင့်တာတောင် မှ အဆင်မပြေတာ တစ်ခုခုရှိရင် လေ့ကျင့်တာကို ရပ်ပစ်ကြပါတယ်။သူတို့တွေ အနေနဲ့ ငါတော်နေတာပဲ အခုတော့ လေ့ကျင့်တာကို ရပ်လိုက်မယ် မနက်ဖြန်မှပဲ ဆက်လေ့ကျင့်မယ် လို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ခရစ်စီယာနိုကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။သူကတော့ သူစိတ်ကျေနပ်တဲ့အထိ လေ့ကျင့်မှုတွေကို လုပ်ပါတယ်" လို့ ပြောထားပါတယ်။.စီရော်နယ်ဒိုဟာ အသက် ၁၅ နှစ် အရွယ်မှာ တုန်းက နှလုံးခုန်မြန်တဲ့ ရောဂါကို ခံစားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရောဂါကို ခွဲစိတ်လိုက်ရပါပြီး ဆေးရုံက ဆင်းတဲ့နဲ့ မနားပဲ training ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးကို ရူးသွပ်တဲ့ စီရော်နယ်ဒို အတွက် အားကစားသမားတွေ ကြောက်ကြတဲ့ နှလုံးရောဂါကတောင် မတုန်လှုပ်စေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။.ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆုကိုလည်းရ ပြီး the Ballon d'Or ကိုပါရရှိခဲ့တာ စီရော်နယ်ဒို အတွက် အလုပ်အပေါ် ကျေနပ်မှုဆိုတာ မရှိပါဘူး။အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ title တွေ အချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့ title တွေက သူ့ကို ပိုပြီး လေ့ကျင့်ဖို့ ကြိုးစားဖို့ တွန်းအားပေးနေပါတယ်။သူက သူ့ကိုယ်သူ ဖိအားပေးပြီး trick အသစ်တွေကို လေ့လာလေ့ကျင့်ပြီး ဘောလုံးဘုရင်ဆိုတဲ့ ...
Career Advice Personal Upgrade
Top5Cafés To Work Near Myae Ni ...
Thein Xtike AungDigital Marketing Managerမြေနီဂုန်းအနီးတဝိုက်ရောက်လို့ အေးအေးဆေးဆေး အလုပ်လုပ်ဖို့၊ မီတင်တွေ့ဆုံဖို့ အတွက် နေရာကောင်းကောင်း လိုက်ရှာနေပြီဆိုရင် ဘယ်ဆိုင်ထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့ အခက်အခဲကိုကြုံနေရပါပြီ။ ဒါကြောင့် New Day Jobs ကနေ အေးအေးဆေးဆေး အလုပ် လုပ်လို့ရမယ်၊ မီတင်တွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေပြီး ကော်ဖီကောင်းကောင်းရနိုင်မဲ့ ကော်ဖီီီီီီဆိုင်နေရာလေးတွေကို စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်။&nbsp;Bamar Thu - Tea &amp; Coffee House (ယခင် ...
Workplace Success Productive